Dad lagu xasuuqay gudaha kaniisad ku taala dalka Mareykanka
arlaadi November 6, 2017 No Comments
Nin hubeysan oo xirnaa dhar madow ayaa waxa uu gudaha u galay kaniisad ku taala magaalada Sutherland Springs ee gobolka Texas isaga oo ku dilay gudaha kaniisada 26 ruux dhaawacayna 20 kalena xili ay dadkaasi ku jireen howlo caabudid Axadii shalay ahayd.
Ninka ayaa markii uu laayay dadka dibada ugasoo baxay kaniisada ayada oo uu qorigiisa markii dambe kula dhegay qof ka mid ah dadka magaalada taasoo sababtay inuu qorigii ka dhacay balse uu gaarigiisii ku baxsaday.
Ninka ayaa markii dambe laga dhex helay gaarigiisa isaga oo dhintay lamana oga inuu is dilay iyo in la toogtay. Magaalada uu dadka ku xasuuqay ayaa ah magaalo yar oo ay ku noolyihiin 900 sagaal boqol oo qof.
Wadaadka kaniisada la weeraray iyo xaaskiisa ayaa ka maqnaa magaalada marka ay toogashada dhacaysay balse waxaa ku dhimatay gabadhooda ayada oo dadka toogashada lagu dilay uu u yaraa ilo shan sano jir ah una weynaa qof 72 sano jir ah.
Dalka Mareykanka ayaa dhowaanahaanba waxaa ka socday toogashooyin kala duwan oo lagula kacayo dadka rayidka ah ayada oo ay inta badana geysanayaan qof keliya.
Arinta cajiibka ah ayaa waxa ay tahay inaysan ku tilmaamin dowlada Mareykanka weerarada noocaan ah argagaxisanimo maadaama dadka geysanayo ay yihiin dadka Kirishtaan ah!